Inorova smart mutauri naSiri akafanotaurwa nezveWWDC 2018 | Ndinobva mac
Iyo yazvino data yakapihwa paInternet inovhura nyowani kuvhurwa neApple muchikamu chevane smart speaker Uye zvakare, sekureva kweye muongorori Gene Munster, Ichi chishandiso chitsva chaizovewo nemubatsiri chaiwo Siri, chimwe chinhu chingatendera mushandisi kuwana Cupertino smart speaker nemutengo wakaderera.
Munster anotaura pamusoro chiratidzo chake chaicho inotevera June 4 panguva yeWWDC 2018 kuti zvikwata zvitsva zvinotarisirwa. Vamwe vanoti maMacBook matsva ave kuda kudonha. Zvisinei, muongorori anotaura izvozvo mutauri akangwara anogona kuve imwe yemidziyo iyi inotarisirwa kuKeynote. Isu tinorangarirawo kuti Beats inopemberera makore gumi ayo ekutanga pamusika gore rino, saka mukuwedzera kune yakatemwa vhezheni Makumi emakore Kuunganidzwa mahedhifoni ako asina waya, zvinogona zvakare kuve nemupikisi mutsva muchikamu chegudzanzwi.
Kune rimwe divi, Gene Munster anoratidza kuti pamusoro pe Iyo HomePod inodhura kwazvo pamusoro pemakwikwiIwe zvakare unofanirwa kugara uchifunga kuti Siri inosara kumashure kwevamwe vatengesi chaivo. Mune bvunzo dzekupedzisira dzakaitwa mukati megore rapfuura, Siri ndiye aive nepasirosi yepasi yekubudirira neruremekedzo, kunyanya, kune Google Mubatsiri. Pamibvunzo mazana masere Siri yakapindurwa nenzira kwayo chete 800%, nepo Google Mubatsiri akawana chikamu che85%.
Sezvakakurukurwa panguva iyoyo, Beats iyo yanga iri chikamu cheApple kwemakore mana haisati yakwanisa kunakidzwa naSiri mune chero zvigadzirwa zvayo. Zvakare, kana mutengo wePambaPod iri dambudziko ($ 349), uyu Beats mutauri naSiri anogona kunge ari madhora mazana maviri nemakumi mashanu. Ehezve, chakachengeteka chinhu ndechekuti iyi modhi nyowani yaive nezvirambidzo kana ichienzaniswa nehama yayo yechikuru: pamwe yakaderera mhando yemagumo kana yakaderera simba rezwi - kushoma kuenderana neasina waya kubatana? -. Mumazuva mashoma tichabuda mukukahadzika. Ungave uchifarira yakaderera mutengo weSiri-based smart mutauri ane mashoma maficha?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Rumo » Inorova smart mutauri naSiri akafanotaurwa nezveWWDC 2018
9x33 Podcast: Pre-WWDC 2018 Dzidzo